Somali News 3.14.22
Published March 15, 2022 at 9:51 AM CDT
Golaha Senate-ka ayaa horumariyay sharci ay wax kaga beddelaan dhalada Iowa ee 40-jirka ah waxayna soo celin karaan barnaamijka loo yaqaan biilka dhalada.
Sharcigu waxa uu lacag badan siinayaa xarumaha madax furashada, xisaabinta lacagta laga soo ururiyo weelasha aan la madax banaanayn, oo u ogolaanaya dukaamada raashinka in ay diidaan soo celinta dhalada haddii ay jirto xarun madax furasho oo u jirta 20 mayl.
Aqalka Jamhuuriga waxay ka shaqaynayaan hagaajinta biilka dhalada goonida ah.
Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga ee Degmada Woodbury Jeremy Dumkrieger ayaa u tartamaya jagada Guddida Kormeerayaasha Degmada Woodbury.
Dumkrieger waa macalin fanka ee Lawton Bronson Community School. Wuxuu maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan kursiga degmada 2-aad.
Doorashada hordhaca ah waxa la qaban doonaa Talaadada, Juun 7, 2022
Magaalada South Sioux City waxay heli doontaa qayb ka mid ah lacagta $ 1.5 tiriliyan biilka uu ansixiyay Senatka Mareykanka ee u qoondeeyay Waaxda Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka ee Mareykanka. Magaaladu waxay heli doontaa shan milyan oo deeq ah. Waxay aadi doontaa dhismaha $40 milyan oo doollar oo lagu nadiifiyo biyaha wasakhda ah oo ku taal dhammaadka koonfureed ee magaalada si loo taageero guryeynta iyo kobaca ganacsiga.
Heshiis cusub oo u dhexeeya Kulliyada Bulshada Waqooyi Bari iyo Kulliyadda Gobolka Wayne ayaa haysa ballan-qaadka xoojinta shaqaalaha tignoolajiyada warshadaha ee gobolka, sida ay sheegeen saraakiisha kulliyadda.
Madaxweynayaasha labada kuliyadood waxa ay kala saxiixdeen heshiis heshiis ah oo abuuraya isku-xidhaha cilmiga farsamada/Bajajjarada ee Barnaamijka Tignoolajiyada Sayniska. Waxay u ogolaataa ardayda dhammaysata shahaadada jaamacadeed ee Waqooyi-bari inay u wareejiyaan dhammaan buundooyinka tacliimeed ee dhammaystiran ee Gobolka Wayne si ay u bartaan farsamada warshadaha oo ay u kasbadaan shahaadada koowaad ee jaamacadda.